War Deg Deg:- Cali Xarbi oo dacwad dil lagu soo oogay iyo sababta rasmiga ee dilka David Amess oo la shaaciyey | Arrimaha Bulshada
Home News War Deg Deg:- Cali Xarbi oo dacwad dil lagu soo oogay iyo sababta rasmiga ee dilka David Amess oo la shaaciyey
War Deg Deg:- Cali Xarbi oo dacwad dil lagu soo oogay iyo sababta rasmiga ee dilka David Amess oo la shaaciyey
Bulsha:- Booliska Britain ayaa Cali Xarbi Cali oo Soomaali ah si rasmi ah ugu soo oogay dacwad ah inuu dilay xildhibaan David Amess, waxayna sheegeen in ficilkaas uu ahaa mid argagixiso.
Sir David Amess oo ahaa 69 jir ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee Ra’iisul Wasaare Boris Johnson ayaa Jimcihii tegay lagu dilay mindi, isaga oo dadka soo doorta kula kulmayey kaniisad ku taalla deegaanka Leigh-on-Sea, oo 65 km u jira London.
Booliska ayaa sheegay in Cali uu goor dambe oo maanta ah kasoo muuqan doono Maxkamadda Westminster Magistrates ee London.
“Waxaan maxkamadda u gudbin doonaa in dilkan uu ahaa mid xiriir la leh argagixisanimo, si gaar ahaan inuu dhiiri-geliyey sabab diimeed iyo mid fikir,” waxaa sidaas yiri Nick Price, oo ah madaxa qeybta dambiyada gaarka ah iyo ka hor-tagga argagixisada ee Adeegga Xeer-ilaalinta Boqortooyada.
“Waxaa sidoo kale lagu soo oogay diyaarinta ficil argagixiso. Tani waxay ku timid caddeymo ay u booliska Metropolitan ku heleen baaritaankooda.”
Booliska waxay sheegeen inaysan jirin cid kale oo loo xiray dilka xildhibaan David Amess, islamarkaana aysan raadineyn qof kale oo lala xiriirinayo.
Dhinaca kale, Matt Jukes oo ah kaaliyaha madaxa booliska London ee howlgallada gaarka ah ayaa ka digay wararka xanta ah ee ku saabsan sababta Cali Xarbi Cali uu u dilay David Amess.
“Maadaama hadda dacwado lasoo oogay, waa muhiim in qof kasta uu is-xakameeyo marka uu uu arrintan ka hadlayo, si loo xaqiijiyo in hanaanka maxkamadda aan laga sii hordhacin,” ayuu yiri Jukes.